Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: गजल के हो ? गजल कसरी लेखिन्छ ? के तपाईको गजल लेखनमा रूचि छ ?? आउनोस् गजल लेखनबारे केही सिकौं !
गजल के हो ? गजल कसरी लेखिन्छ ? के तपाईको गजल लेखनमा रूचि छ ?? आउनोस् गजल लेखनबारे केही सिकौं !
आजकल गजल लेखनमा बाढी नै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गजल नलेख्ने कोही छैन जस्तो देखिन्छ । एउटाले लेखेको हेरेरै अर्काले गजल लेख्ने गरेको देखिन्छ । गजलप्रतिको आकर्षण बढ्नु राम्रो कुरा हो ।
तपाई गजलमा रूचि राख्नुहुन्छ ? अर्थात् साथीभाइले लेखेको देखेरै लेखिरहनुभएको छ ? तपाईलाई गजल लेखनमा रूचि छ भने गजल लेखनबारे आधारभूत ज्ञान लिन अनिवार्य हुन्छ । गजलको आधारभूत विषय थाहा पाएपछि नै तपाई राम्रो गजल लेख्नु हुन्छ । आधारभूत ज्ञान लिएको व्यक्ति र निरन्तरको मेहनत एवम् साधानाबाट मात्र उत्कृष्ट गजल लेख्न सकिन्छ ।
गजलमा रुचि राख्ने जो सुकै व्यक्तिले पनि सर्वप्रथम 'गजल के हो' ? भन्ने जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ ।
गजल गायन/संगीतसँग निकट विधा हो । यसर्थ अनिवार्य रूपमा लयवद्ध हुन आवश्यक हुन्छ । सरल र प्रतिकात्मक रुपमा मतला, शेर, काफिया, रदिफ, मकता, तखल्लुस र बहर जस्ता विभिन्न तत्वहरु प्रयोग गर्दै aa, ba, ca, da, ea शैलिमा गजल लेखिन्छ।
यसर्थ एउटा निश्चित लय र संरचनामा लेखिएको गीत नै गजल हो भन्न सकिन्छ ।
गजल शव्दको अर्थ र ईतिहासको बारेमा बिभिन्न विद्वानहरुले आ-आफ्नै तरिकाले मत दिएपनि गजलमा हुनुपर्ने मुलभूत तत्वहरुमा भने त्यति धेरै मतभिन्नता छैन ।
गजल सृजनामा रूचि भएका नव आगन्तुक पाठकहरुको लागि उपयुक्त हुने हेतुले गजलका तत्वहरु बारे केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
दुई-दुई पङ्क्ती मिलाएर लयात्मक तरिकाले गजल लेखिन्छ र त्यहि दुई पङ्क्तीलाई नै गजलको शेर भनिन्छ। गजल शेरहरूको समष्टि रूप हो ।
शेरका प्रत्येक हरफलाई मिसरा भनिन्छ भने शेरको पहिलो मिसरालाई मिसरा-ए-उला र दोश्रो मिसरालाई मिसरा-ए-सानी भनिन्छ।
सामान्यतया गजलमा ५ शेर देखि ८ शेर हुने गर्दछ । यसको कुनै कडी-कडाऊ नियम छैन । त्यसैले गजलमा कम्तिमा ३ शेरदेखि माथि जतिपनि शेर लेख्न सकिन्छ । तर एकदम कम शेर र अधिक शेरलाई पनि राम्रो मानिदैन । तसर्थ ५/६ शेर भएको गजललाई आदर्श गजल मान्ने गरिन्छ ।
माथिको शेरमा आएका खाम र नाम दुई शब्द काफिया हुन् । मिसरा ए-सानीमा खाम र मिसरा ए-उलामा नाम छ । समस्वरात्मक रुपमा रदिफ भन्दा ठिक अगाडि बारम्बार दोहोरिएर आऊने शब्द नै काफिया हो । काफिया शव्दको अर्थ 'बारम्बार आऊने' हुन्छ र हामीले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि गजल् विधा अरब, फारस, हिन्दुस्तान हुँदै नेपालमा भित्रिएको बिधा हो। तसर्थ अरबी भाषामा 'वारम्वार आऊने' वा काफिया गजलको त्यो तत्व हो जुन तत्व बिना गजल अधुरो हुन्छ । गजल भन्ने बिधाको अलग्गै पहिचान हुदैन, अझ यसो भनौं काफिया नै गजलको मुटु हो । अर्थात काफिया गजल बिधा भनेर छुट्ट्याउने माध्यम हो ।
काफियालाई सामान्यतया ४ प्रकारले छुट्याऊन सकिन्छ।
(ख) आंशिक वा शाब्दिक काफिया
क) पूर्ण काफिया
पूर्ण काफिया भन्नाले सिङ्गो शव्द नै काफियाको रुपमा आएको छ भने त्यस्तो काफियालाई पूर्ण काफिया भनिन्छ। जस्तै: खाम, नाम, याम, लाम, दाम गाउँ,जाउँ, आउँ, पाउँ,धाउँ,जाउँ, इत्यादि ।
पूर्ण काफिया प्रयोग गरेर लेखिएको गजलको एउटा उदाहरण हेरौं-
सधैं-सधैं बग्ने खोली एकै छिन रोकीइदेउ
तिम्रो वेगसँग मलाई अलिकति काम थियो
(साभार: एउटा बन्द खाम, ललिजन रावल)
(ख)आंशिक वा शाव्दिक काफिया
उपरोक्त शब्दहरुमा क्रमश: हार, धार, चार, कार, तार, ले काफियाको रुपमा काम गरेको छ भने प्रहारको "प्र" आधारको "आ" बिचारको "बि" सरोकारको "सरो" र अवतारको "अव" ले काफियाको काम गर्दैनन् । यहाँ पूर्ण शब्दको केहि अंशले मात्र काफियाको काम गरेको देख्न सकिन्छ। तसर्थ यस्ता काफियालाई आंशिक वा शब्दांश काफिया भनिन्छ ।
आंशिक वा शव्दांश काफियाको प्रयोग भएको एउटा उदाहरण हेरौं-
बस्न त म आफ्नो छुट्टै संसारमा बसेको छु
आसन छ तरवारको देखेको छु आफूले नै
बाध्य भई खुकुरीको यो धारमा बसेको छु
ठूलै सङ्कटमा छु म जङ्घारमा बसेको छु
शहरमा बसेको छु भन्ने सोच्दै थिएँ तर
साहुनीको भट्टीजस्तो सानो ठाउँमा हैन आज
महलभन्दा ठूलो यो कारागारमा बसेको छु
(साभार: पदम गौतम, एकलाशको फूल)
उल्लेखित गजलमा संसारको 'सं', जङ्घारको 'जङ्', बजारको 'ब' कारागारको 'कारा'ले काफियाको काम गर्दैन । तसर्थ यस्ता काफिया आंशिक वा शब्दांश काफिया अन्तर्गत पर्दछन्।
एकाक्षरी काफिया भन्नाले काफियाको रुपमा एउटा अक्षर मात्र आउने वा आंशिक शब्दको अन्तमा काफियाको रुपमा आउने एउटा अक्षरलाई एकाक्षरी काफिया भनिन्छ। सामान्यतया: गजलमा एकाक्षरी काफिया प्रयोग गर्नु राम्रो मानिदैन । तर कतिपय गजलकारले प्रयोगको रुपमा वा विचलनको रुपमा एकाक्षरी काफिया प्रयोग गरेको पाइन्छ।
एकाक्षरी काफिया प्रयोग गरिएको गजलको पनि एउटा उदाहरण हेरौं-
व्यथै व्यथा छ मनभरी खुसी खोजूँ कतातिर ?
साउन भदौ छ गहभरी नदी खोजूँ कतातिर ?
आरु फुल्यो वगैंचामा, पीडा फुल्यो मुटुभरि
चरो परेछ जालमा चरी खोजूँ कतातिर ?
मेरो कथा लेखूँ कहाँ, मसी खोजूँ कतातिर ?
(साभार: उही बाढी उही भेल, रवि प्राञ्जल )
आदरणीय गजलप्रेमी महानुभावहरू ! यस गजलमा आएका खुशी, नदी, चरी, मसी शब्द नै एकाक्षरी काफिया हुन् । यि कुनै पनि शब्दको ध्वनी सिंगो रुपमा एक आपसमा मिल्दैन तर प्रत्येक शब्दका अन्तिम स्वरहरू एक आपसमा मिलेका छन् । यहाँ खुशी शब्दको खु र नदी शब्दको नले काफियाको काम गरेका छैनन् भने खुशी शब्दकै शी र नदी शब्दको दीले काफियाको काम गरेका छन् । यस गजलका शी, दी, री, सी नै एकाक्षरी काफिया हुन् ।
एकाक्षरी काफियामा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने पूरा शब्दको एउटा अक्षरले मात्र काफियाको काम गरिरहेको हुन्छ ।
(घ)मिलित काफिया :
समस्वरात्मक दुईवटा फरक शब्द वा तिनका अंश मिलेर बन्ने काफियालाई मिलित काफिया भनिन्छ । जस्तैः (१) जाग्छ, दाग छ, भाग्छ, माग छ, नाच्छ, काग छ (२) पियो, सियो, नदी यो, कति यो, दियो, भरी यो (३) जगत, फगत, मन त, रगत, अब त ।
मिलित काफियाबारे अलि लामै चर्चा हुन आवश्यक हुन्छ । मिलित काफिया बारे थप चर्चा एउटा छुट्टै आलेखमा गर्नेछु । यो लेखमा यति मात्र ।
३. रदिफ :– रदिफ अरबी शब्द हो । यसको अर्थ अनुगामी हुन्छ । गजलको पहिलो शेर (मतला)का दुवै मिसरा र अन्य शेरहरुका मिसरा ए-सानीको अन्तमा प्रयोग हुने उही पद वा पदावलीलाई रदिफ भनिन्छ ।
उल्लेखित शेरको दुबै मिसरामा थियो, थियो शब्द आएका छन् । यसरी दोहोरिएर आईरहने शब्द नै रदिफ हो ।
रदिफ कम्तिमा एक शब्ददेखि बढीमा तीन शब्द सम्मको हुनु शास्त्रीय दृष्टिले उचित मानिन्छ । रदिफ काफियाको ठिक पछाडि प्रयोग हुन्छ तर यो गजलको अनिवार्य तत्व होइन ।
रदिफको प्रयोगले गजलको सौन्दर्य प्रशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र गायनमा समेत श्रुतिमधुरता थप गर्ने हुनाले समुचित रदिफको प्रयोग सुन्दर मानिन्छ । त्यसैले अधिकांश गजलमा रदिफको प्रयोग हुन्छ ।
आजभोलि बाघले घाँस खा'छ मेरो देशमा
मुठिभरलाई गणतन्त्र आ'छ मेरो देशमा
(साभार: मेरो देशमा गजलबाट, मिसन अधिकारी)
उल्लेखित शेरमा 'मेरो देशमा' रदिफको रुपमा प्रयोग भएको छ । रदिफले एउटा स्थान बिशेषलाई अभिव्यक्त गरेको छ भने गजलमा श्रुतिमधुरता पनि थप गरेको छ । 'मेरो देशमा' रदिफ नराख्ने हो भने गजलका शेरहरू अपूर्ण जस्ता देखिन्छन् ।
त्यसैले अर्थपूर्ण रदिफको प्रयोग गजलमा आवश्यक छ । रदिफ राख्ने गर्ने नाममा जथाभावी प्रयोग भने गरिनु हुन्नँ ।
बाँकी थप अर्को आलेखमा प्रस्तुत गर्नेछु । यो सानो आलेख अध्ययन गरिदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद !
Posted by www.Nepalmother.com at 3:53 PM